Dhaqaalaha Soomalia wuxuu kor u kac sameeyey 2013-ka ilaa iyo 2017-ka – Madal Furan
Hoy > Warka > Dhaqaalaha Soomalia wuxuu kor u kac sameeyey 2013-ka ilaa iyo 2017-ka
Madal Furan – Warbixin uu bangiga caalamiga uu ka soo saaray Soomaaliya ayaa waxay ku sheegtay inuu dhaqaalaha dalka uu kor u kaca uu sameeyey.
In shacabka isticmaala loo abuuro waxyaabo lagu sugayo ammaanka adeegaas isla markaana la xaqiijiyo sida la isugu halleyn karo.
In la hir galiyo hannaan horumar u sii horseedi kara adeeggaas, sii ballaarintiisa, maareynta halista iyo in la yareeyo fursadaha ay heli karaan dadka sida been abuurka ah wakiillada uga noqda ama waxyeello kasta oo ka dhalan kartaba.
In la ilaaliyo macluumaadka shacabka isticmaala adeegga iyo iney si sahlan u adeegsan karaan.
In la xoojiyo ka war qabidda hab sami u socdkiisa iyo cabashada dadweynaha, si looga hor tago hakad ku yimaada adeegga taleefanka, wax kasta oo sabab u noqdaba
Xibiga Shariif Xasan oo la diiwaan geliyey
Xooggagii jabhadda ONLF oo dib ugu laabtaan magaaladda Jigjiga